कलियुगमा द्रौपदी ! सुहागरातको दिन ४ वटा छोरालाई सासुले बुहारीको कोठामा पठाएपछि…. – Dailny NpNews
कलियुगमा द्रौपदी ! सुहागरातको दिन ४ वटा छोरालाई सासुले बुहारीको कोठामा पठाएपछि….
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ३०, २०७८ समय: २१:०९:५८
एजेन्सी । महाभारतमा द्रोपदीको ५ पति रहेको उल्लेख गरिएको छ । पाँच पाण्डवका एक श्रीमती द्रोपदी दिइन । यो धार्र्मीक ग्रन्थ महाभारतमा पढ्न सकिन्छ । तर भारत दिल्लीको छेउछाउ उत्तर प्रदेशको गाजियाबाद शहरमा पनि यस्तै घटना भएपछि बुहारी प्रहरी कार्यालय पुगेकी छन् । सासुले विवाहकै रात आफ्ना चार छोरालाई बुहारीको कोठामा पठाएकी थिइन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
चार दाजुभाई मध्य एक जनासंग उनको विवाह भएको थियो । जो संग विवाह भएको थियो उनका दुई दाई र एक भाई थिए । सुरुमा विवाहका लागि कान्छो छोरालाई देखाइएको थिया तर विवाह पनि उनका दाईसंग गराइयो ।
विवाह पछि, सासुले उनलाई आफ्ना चारजना छोराहरूसँग सम्बन्ध राख्न बाध्य पारिन् । जब उनले आफ्नो पति बाहेक अरू कसैसँग सम्बन्ध राख्न इन्कार गरिन् उनी माथि ज’बरज’स्ती गरियो। प्रहरीले मु’द्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
बेहुलीले प्रहरीसंगको बयानमा श्रीमान्‌का दुई जना जेठा र एक कान्छो भाइ छन् र उनका दुवै दाजुहरु विवाहित छन्। उनको विवाहको दोस्रो दिन, उसकी सासुले दुई जेठाजुसंग सम्बन्ध राख्न लगाइन् । दुलहीले विरोध गरीन् र उनी कोठाबाट बाहिर आईन्। उनलाई या’त’ना दिइयो । उनलाई माइवाट ट्रक र बाइक किन्न ४ लाख रुपैयाँ ल्याउन दवाव दिए ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,